Askari ka tirsan Ciidamada Milateriga Somaliland oo la Dilay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Askari ka tirsan Ciidamada Milateriga Somaliland oo la Dilay
Askari ka tirsan Ciidamada Milateriga Somaliland oo la Dilay
Awdal (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya degmada degmada Lughaye ee gobolka Awdal, ayaa sheegaya in Askari ka tirsan ciidamada Milateriga Somaliland uu askari kale ku dilay Tuulada Tuurka ee degmadaasi.
Askari la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray, Saleebaan Cabdillaahi Jaamac Ducaale, sida warbaahinta gudaha ay baahiyeen. Waxa uuna ka tirsanaa ciidama Milateriga Somaliland ee ku sugan Saldhiga Geerisa ee degmada Lughaye.
Xilliga la dilayay Askariga ayaa la sheegay inuu jiifay, inkastoo aan si rasmi ah loo caddeyn sababaha keenay dilka askariga iyo waxyaabaha ay isku qabteen.
Ciidamada Somaliland howlgal ay sameeyeen ayaa waxaa u suurtagashay in askariga dilka geystay kasoo qabtaan deegaanno u dhexeeya Beeyo-cadaado iyo Gargaara.
Askari dilka geystay ayaa hadda ku xiran saldhiga Booliska Gargadadar ee Gobolka Awdal.
Askari ka tirsan ciidamada Somaliland